Inona no atao hoe tsy mety? | Bezzia
Maria Jose Roldan | 16/07/2021 22:51 | RENY
Tena ara-dalàna amin'ny vehivavy maro 48 ora aorian'ny fiterahana, manana contractions mahery ao amin'ny tranonjaza. Ireo fifanarahana ireo dia antsoina hoe tsy mety ary tena mafy ary koa maharary.
Ny lesoka voalaza etsy ambony dia ara-dalàna tanteraka ary vokatry ny zava-misy fa tsy maintsy miverina amin'ny habeny voajanahary ny tranonjaza. Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hiresaka aminao amin'ny an-tsipiriany momba ny tsy mety izahay ny maha-zava-dehibe azy ireo amin'ny famerenana amin'ny laoniny tanteraka ny vehivavy niteraka.
1 Ny fifandraisana misy eo amin'ny tsy mety sy ny fampinonoana
2 Ny fanaintainan'ny fanaovan-dratsy
3 Fa maninona no ilaina ny tsy mety?
Ny fifandraisana misy eo amin'ny tsy mety sy ny fampinonoana
Misy fifandraisana mivantana eo amin'ireo fihenan'ny tranonjaza sy ny fampinonoana. Isaky ny maka ny tratrany ny zazakely dia mamoaka ny hormonina oxytocine ny vatan'ilay vehivavy ka mitarika fahasahiranana. Izany no maha-zava-dehibe ny fampinonoana raha ny famehezana ny lalan-drà hita ao amin'ny tranon-jaza sy ialao ny mandeha ra anaty.
Ny fanaintainan'ny fanaovan-dratsy
Ny tsy fiterahana dia fanaintainana mafy sy mafy ny fihomboan'ny tranonjaza izay matetika maharitra 48 ora aorian'ny fiterahana. Raha sanatria ka matanjaka ny fanaintainana, ny vehivavy dia afaka mandray ibuprofen hanampiana ny fanaintainana toy izany. Ireo lesoka ireo dia miseho matetika amin'ny zaza faharoa. Vitsy ny renim-pianakaviana vao mazàna manana fihenam-bidy toy izany aorian'ny fiterahana.
Arakaraka ny habetsaky ny ankizy no mety hijaly noho ireo lesoka voalaza etsy ambony. Miankina betsaka amin'ny fanaintainana koa ny fanaintainana raha ho an'ny vehivavy dia ny zanany voalohany na raha ny mifanohitra amin'izay dia efa nahazo fanaterana maro izy. Raha toa ka teraka voalohany ny vehivavy, ny fanaintainana avy amin'ny korontana dia somary malefaka, mampatsiahy ny tonga fotoana.
Raha miteraka kambana na zazakely mavesatra dia miteraka fanaintainana mafy sy mafy. Amin'ny tranga toy izany dia tena ilaina ny fanaintainana, noho izany matetika dia mila mihinana karazana fanafody izy ireo hanampiana amin'ny fampitoniana ireo fanaintainan'ny intrauterine ireo.
Fa maninona no ilaina ny tsy mety?
Ary farany, tsy maintsy hambara fa ilaina ny voa ary koa voajanahary, satria raha tsy izany, Ilay vehivavy vao teraka dia mety hijaly amin'ny rà mandriaka ao anatiny izay mety hanimba ny fiainany. Zava-dehibe ny aorian'ny fiterahana dia miverina miverina tsikelikely amin'ny toerany ny tranon-jaza ary mamerina ny habeny voajanahary. Ireo fifanarahana ireo dia manampy izany hitranga ary tsy misy rà mandriaka ao anatiny.
Raha fintinina, ilay vehivavy vao teraka ny zanany, tsy tokony hanahy ianao amin'ny fotoana rehetra momba ny fikorontanana mafy na ny ketrona ao anaty tranonjaza. Ilaina ireo fihenam-bidy ireo mba hahafahan'ny tranon-jaza misintona tena tsy misy olan'ny taolam-paty mety ho tavela nahatonga ny fiterahana.
Aza adino fa ny natiora dia tsy maintsy mandray ny làlany ary ilaina ny famindrana ny tranon-jaza ary nitombo noho ny fitondrana vohoka, Farano amin'ny fiverenana amin'ny habeny voajanahary ary apetraho ny tenanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » RENY » Inona no atao hoe tsy mety?
Ireo no lamba niraisan'ny orinasa lamaody maharitra